Umsebenzi osemqoka namazinyo (njengoba umuntu noma isilwane) noma ubani akuyona imfihlo. It - ukugaya ukudla (e izilwane futhi abambe futhi ubambe inyamazane). Anatomy amazinyo futhi isimo sabo kuhlukile kancane kuye umsebenzi. Kunezinhlobo ezine: amazinyo, canines, premolars futhi molars. Kubantu, lezi zinhlobo ezimbili uqale umsebenzi ahlabayo, kanti owokugcina uyoba ngo - wayichoboza.
Inombolo kwamazinyo abantu - 32, kuhlukile izilwane (kuncike zinhlobo). Basuke etholakala eluhlwini elingenhla kanye nemihlathi aphansi. izinyo isakhiwo kunoma yikuphi amathambo emhlathini ngokuvamile okufanayo, zenziwe kwezicubu efanayo. Ngamunye wabo itholakala yayo ithambo imbobo kwakhiwa aphansi noma ongenhla, okuthiwa ama-alveoli. Anatomically kunoma iyiphi izinyo kukhona iminyango elandelayo: umqhele, intamo, impande (elilodwa noma ngaphezulu). Umqhele - engxenyeni engenhla kulula kakhulu ukufinyelela kuwo ngoba ukuhlolwa, projecting ngenhla ushingamu. Wesibeletho kuyinto Division encane mncane, ise-soft izicubu ukujiya. Ngakho, impande - engxenyeni angena womthombo ukujula. ekupheleni Its ichopho izinyo ibizwa ngokuthi, esiswini sakhe iwela imizwa nemithambo yegazi. Izinyo isakhiwo (ukuthi Canine noma izinyo lomhlathi) muhle kabi ifomu sangaphandle kuphela, kodwa futhi isibalo izimpande (1 kuya ku-3). Umumo umsiki - flat futhi ububanzi, banalo elidlula. Canines libhekene elola kancane, premolars futhi molars - ukuhlafuna ebusweni ngokuphawulekayo engalingani.
Ukuchaza Sakhiwo sangekhatsi izinyo, kufanele kuphawulwe ukuthi izingqimba izicubu ahlelwe therein. Isendlalelo ejulile - uginindela - imelelwa lenqwaba Neuro-semithambo. Dentin elilizungezile, ngezinye izikhathi ibizwa ngokuthi bone kwamazinyo. Kuhle okuqinile, kodwa kungathambisa lapho zihlatshwa nezilwanyana ezincane. Kodwa echaza ukwakheka izinyo ungqimba ebusweni, kubalulekile ukusho ukuthi akufani ngaso umqhele kanye nezimpande. enamelled Okokuqala (ephawulekayo okuqinile, ezazihlanganisa 97 nosawoti% amaminerali). Olwelwesini impande yakhiwa usimende, lapho, ngaphandle nosawoti lime kukhona inqwaba collagen ethandele. Kwakamuva nokwelukiweyo phakathi ithambo, ukudala periodontal (futhi ngaleyo ndlela axube izinyo ukuze imbobo yayo).
Njengoba kushiwo ngenhla, izinyo komuntu imisebenzi emikhulu emibili: kusukela amazinyo futhi canines - ahlabayo, e premolars futhi molars - ukugaywa. Ngo ezincelisayo, ukuqothulwa kwamahlathi enze injongo efanayo. Kodwa amazinyo futhi canines lihlukile. I izilwane ezidla ezinye kuqala zisetshenziselwa "usike" izingcezu ukudla, Amazinyo - ngokubulala futhi ubambe isisulu. Front ahlabayo namazinyo ezidla uhlaza izidalwa eziphilayo kudingeka usike izitshalo, kokufinyelela ukudla. ngokuvamile Canines bengekho. Uma aziyi ndawo, wena ethulwa kuphela abesilisa. basuke okuvame ukusetshenziswa ukulwa nomunye elowesifazane nomthofu esinyathelweni (iphakethe). isakhiwo ezincane amazinyo, njengoba kuchaziwe ngenhla, kuzo zonke zezilwane ezincelisayo eziphilayo cishe efanayo ophilayo.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi mayelana, ukuthi siqukethe amazinyo! Lokhu inforrmatsiya kwezinye izimo kungase kube usizo!
Sokwenziwa ngokungabi bikho inani elikhulu namazinyo: Izinhlobo
Ngesitulo samasondo ibhayisikili - nemnandi ewusizo
Inhlanzi Ray-finned - zilwane, izici jikelele, isakhiwo izinhlanzi bony
Router ithebula ngezandla - lula futhi imali ekulondolozeni